CIN Khabar कृषि अनुदान : कागजले अल्झायो कर्मचारीले 'कुम्ल्यायो'
कृषि अनुदान : कागजले अल्झायो कर्मचारीले 'कुम्ल्यायो' कृषिमा अनुदान के-केमा पाइन्छ ? किसान नै बेखबर
विदुर खवास आईतबार, वैशाख २९, २०७६, ०७:२०:००
धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ भीरगाउँका लीलम भण्डारी बाख्राको खोर सुधारका लागि भेटेरीनरी अस्पताल तथा विज्ञ सेवा केन्द्रले दिने एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाट बञ्चित हुनुपर्यो ।
कार्यालयले भनेकै ढाँचाको व्यवसायिक योजना र अन्य कागजात जुटाउन नसक्दा उहाँले त्यो अनुदान पाउनु भएन । ‘कर्मचारीले एउटा भन्छन हामीले त्यो जानेका छैनौ ’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो, ‘अनुदान मेरा लागि आकाशको फल आँखातरि मर भएको छ ।’
किसानले कृषि र पशुपालनबाट उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । समय, मिहिनेत र लगानी खर्चेका किसान प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र अव्यवस्थित बजारको मार खेपिरहेका छन् ।
परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ ।
कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी परियोजनाले किसानलाई कृषि औजार, प्राविधिक सहयोग र नगद अनुदान दिने गरेका छन् । त्यसका लागि किसानले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर घाँस दाउरा र कुटो–कोदालो गर्ने किसान त्यस्तो प्रक्रियाको विषयमा अनविज्ञ छन् । सूचनामा पहुँच नभएका कारण वास्तविक भूमिहीन किसानहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिन नपाउने देखिएको छ ।
वास्तविक किसानसम्म सहज प्रकृयाबाट अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम कसरी पु¥याउने भन्नेतर्फ कसैको चासो नगएको कृषि अभियान्ता जीवन राई बताउनुहुन्छ । परम्परागत निर्वाहमुखि व्यवसायमा अल्झेका किसानलाई लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सञ्चालित अनुदानबारे बुझाउन आवश्यक छ ।
सेवाग्राहीबाट पनि परियोजनाको लागत अनुमान बढी देखाउने र सेवा प्रदायकरकर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । हाकीमदेखि तल्ला तहका कर्मचारीबीच सेटिङ हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । अधिकांश लक्षित वर्गमा अनुदान सहज रूपमा जान सकेको छैन । सरकरी अध्ययन टोलीले पनि कृषिमा अनुदान बास्तविक किसानले लाभ लिन नसकका निस्कर्ष निकालेको छ ।
के के मा पाइन्छ अनुदान ?
सरकारले छुटाएको अनुदानको सात अर्बमध्ये ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । बाँकी करिब २ अर्ब मात्रै मन्त्रालयले केन्द्र र जिल्लास्तरबाट परिचालन गरिरहेको छ ।
‘तैरिने मत्स्य दाना उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई मेसिनरीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४’ लागू गरेको हो । चालू आवबाट सुरु भएको कार्यविधिअनुसार स्वीकृति प्रस्तावको लगानी हेरी सरकारले एउटा उद्योगलाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्नेछ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख
विदेशमा कृषिसम्बन्धी तालिम तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने युवालाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, लागू गरिएको छ । यसले युवालाई कृषि पेसामा टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अहिले यो कार्यक्रमलाई स्थगति गरिएको छ । र, आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने योजना बनिरहेको छ ।
मिट मार्ट सञ्चालन १० लाख
स्थानीय निकायसँग मिलेर जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले तोकिएको मापदण्डका आधारमा एउटा मिट मार्ट सञ्चालन गर्न अधिकतम १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यसले व्यवस्थित मासुपसलको संख्या बढ्ने अपेक्षा छ ।
५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नबढ्ने गरी बैंकले लगानी गर्ने सर्तअनुसार ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ लागू गरिएको छ । कर्जा प्रवाहका निश्चित क्षेत्र तोकिएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, पुष्प, आलू, माछालगायत उपज सुरक्षित रूपले भण्डारण गर्न ‘शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिएको थियो । शीतभण्डारणको अभावमा कृषि उपज कुहिने, किसानले उचित मूल्य नपाउने, बेमौसममा कृषि उपज बजारमा नपाउने समस्या छ । तर, कर्मचारीको लापरबाहीले यो अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।
किवी(भुइँस्याउ प्रशोधन उद्योग ७३ लाख
स्वदेशमै आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन बढाउन अनुदानका माध्यमबाट किसानलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४’ लागू गरिएको छ । यो प्रविधिले प्रतिकूल मौसम, शत्रुजीवको संक्रमणबाट नियन्त्रण, मल र पानीको नियन्त्रण गरी तरकारी उत्पादन बढाउन सक्ने अपेक्षा छ ।
प्रशोधन कारखाना स्थापना ९अदुवा र बेसार० अनुदान कार्यविधि, २०७२ लागू गरिएको थियो । उत्पादित बेसार र अदुवाको स्वदेशमै स्तरीय प्रशोधन गर्नका लागि एउटा उद्योगमा कुल लगानीको ५० प्रतिशत वा बढीमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध हुने नीति थियो । तर, कसैले पनि अनुदान नलिएका कारण रकम खर्च नै भएन ।
कृषि विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ले मौरी पालनसम्बन्धी आवश्यक सामग्री एवं औजार उपकरण वितरणमा यो रकम उपलब्ध गराउँछ । एक किसानले १ लाख ८० हजार पाउने गरी सिंगो पकेट क्षेत्रलाई ३६ लाख उपलब्ध हुन्छ । अनुदान पाउन एउटा किसानले २० वटा गोलासहितको मौरी घारका दरले एउटा पकेट क्षेत्रमा ४ सय मौरी गोला हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले मिल्किङ मेसिन खरिद गर्दा ५० प्रतिशत, तर अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख २९, २०७६, ०७:२०:००
खवास धनकुटाको रेडियो लालिगुराँसका स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ।
सामुदायिक चिकित्सा अध्ययन क्याम्पस खण्डहरमा परिणत
कृषि अनुदान : कागजले अल्झायो कर्मचारीले 'कुम्ल्यायो'
राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम धनकुटामा सुरु
समयमा फुलेन स्थानीय जातको सयपत्री
काठमाडौँ र पोखराभन्दा धनकुटा सफा
घरभाडा छुट गर्ने ८६ जना सम्मानित